အာရှပစိဖိတ်ရှိဆရာ/ ဆရာမ များအတွက်ယူနက်စကိုစစ်တမ်း Survey
အာရှပစိဖိတ်ရှိဆရာ/ ဆရာမ များအတွက်ယူနက်စကိုစစ်တမ်း
* 1. သင့်ကျောင်းတွင်အသုံးပြုသောအဆင့်အမြင့်ဆုံးနည်းပညာကဘာလဲ။ သင်စဉ်းစားသောမည်သည့်နည်းပညာကိုမဆိုထည့်သွင်းပါ '' အဆင့်မြင့်ဆုံး။
* 2. သင်ရဲ့အမြင်မှာဒီအဆင့်မြင့်နည်းပညာဟာသင့်ကျောင်းမှ့လုပ် ငန်းများတွင်သက်ရောက်မှုရှိလား။ ကျေးဇူးပြုပြီးအောက်ကထဲကတစ်ခုရွေးပါ
* 3. အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှင့်အောင်မြင်စွာအသုံးပြုခြင်းအတွက်အောင်မြင်သောသင့်နိုင်ငံရှိကျောင်းများကိုသင်အကြံပြုနိုင်ပါသလား။ ရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျောင်း၏အမည်နှင့် ကျောင်းသည်မည်သည့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်ကိုပြောပြပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီးသင့်အကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပြပါ ဦး ။
* 4. ဘယ်နိုင်ငံမှာနေလဲ
Afghanistan Australia Bangladesh Bhutan Brunei Darussalam Cambodia China China-Hong Kong China-Macau China-Taiwan Cook Islands Democratic People’s Republic of Korea Fiji India Indonesia Iran Japan Kazakhstan Kiribati Kyrgyzstan Lao People’s Democratic Republic Malaysia Maldives Marshall Islands Micronesia Mongolia Myanmar/မြန်မာ Nauru Nepal New Caledonia New Zealand Niue Pakistan Palau Papua New Guinea Philippines Republic of Korea Russian Federation Samoa Singapore Solomon Islands Sri Lanka Tajikistan Thailand Timor-Leste Tokelau Tonga Turkey Turkmenistan Tuvalu Uzbekistan Vanuatu Viet Nam အခြား (အသေးစိတ်ဖော်ပြပါ)
* 5. ဘယ်ကျောင်းအဆင့်မှာသင်သင်ပေးသလဲ။
* 6. ကျား/မ
သင့်ရဲ့အမြင်များကိုမျှဝေဖို့အချိန်ယူတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်၏အဖြေများကိုဂျပန်အစိုးရ၏ငွေကြေးဖြင့်ပညာရေးနယ်စပ်နည်းပညာများနှင့်ပတ်သက်သည့်ယူနက်စကိုဘန်ကောက်၏စီမံကိန်းအ တွက် အသုံးပြုပါလိမ့်မည်။